'Kumele axolelwe uGrace Mugabe nobhululu bakhe,' kusho umshana kaMnangagwa | isiZulu
Izihlobo zikaMugabe zamlaxaza kudala uGrace ngoba ewuxova umndeni
Harare – Umshana kaMengameli waseZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa usenxuse ukuba kuxolelwe uGrace Mugabe kanye nobhululu bakhe abaziwa ngeleGeneration 40, wathi manje sekuyisikhathi sokuthi iZanu-PF iqhubekele phambili ibumbene.
Ngokusho kombiko weNewsDay, ekhuluma ngesikhathi kunomcimbi wokugubha ukugcotshwa kukaMnangagwa eDema Rural District Council ngempelasonto, uTongai Mnangagwa uthe labo ababeseka uGrace babeholelwe ophathe.
Uthe manje sekuyisikhathi sokuthi kuthelelwane amanzi njengoba kubhekwe okhethweni luka-2018.
"Engingakusho ukuthi ayisekho indaba ye-G40 neLacoste. SiyiZanu-PF. Kumele sibhekane ngqo namaqembu aphikisayo sibumbene njengoba kuyiwa okhethweni. Le G40 iyizingane zethu ezazidukiswe ngabathile, kepha kubalulekile ukuthi siqhubekele phambili nomsebenzi yize kunezingqinamba," kucashunwa uTongai.
UTongai uphinde watshela abalandeli bakamengameli omusha wathi lo mgubho usazoba mkhulu njengoba kulindeleke abaculi abafana noJah Prayzah ukuba banandise.
Imibiko kulezi zinyanga ezedlule ibitshengisa ukuthi iZanu-PF iqembuke phakathi njengoba abantu abebegaqele isikhundla sikaRobert Mugabe bebebhekene ngeziqu zamehlo.
UMnangagwa uthe uGrace wayeyingxenye yabasembangweni wokuthatha isikhundla sikaMugabe.